विराटनगर । प्रदेश १ मा दैनिक सबैभन्दा धेरै पिसिआर परीक्षण गर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर परीक्षण बन्द भएको छ ।
पीसीआर परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने किट उपलब्ध नभएको कारण प्रतिष्ठानमा गरिँदै आएको पीसीआर परीक्षण बन्द भएको छ ।
पीसीआर परीक्षण नहुँदा प्रतिष्ठानमा उपचाररत बिरामीको शल्यक्रियासमेत रोकिएको छ । सिकिस्त बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुअघि पिसिआर परीक्षण गर्ने गरिएको थियो ।
प्रतिष्ठानमा पत्थरीको शल्यक्रिया गर्न आएकी संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिकाकी २६ वर्षीय प्रभा लिम्बूले पीसीआर परीक्षण नभएकै कारण सल्यक्रिया रोकिएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले किट नपठाएका कारण पीसीआर परीक्षण बन्द भएको बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्ष, शल्यक्रिया, हाडजोर्नी , प्रसूति वार्ड, बच्चा वार्डलगायतका वार्डमा भर्ना भएका बिरामीको शल्यक्रिया रोकिएको छ । पिसिआर परीक्षण रोकिएपछि दुर्घटनामा परेका र इमेरजेन्सी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी जोखिममा परेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका सयौं बिरामीको पीसीआर परीक्षण नभएका कारण शल्यक्रिया हुन नसकेको प्रतिष्ठानको हाडजोर्नी विभागका प्रमुख डा. पसुपती चौधरीले जानकारी दिनुभयो । शल्यक्रिया गर्न प्रतिष्ठान भर्ना भएका बिरामीको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको हाडजोर्नी विभाग र आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका दर्जनौं बिरामीको शल्यक्रिया पिसिआर नभएकै कारण रोकिएको जानकारी दिनुभयो । पीसीआर परीक्षण नभएका कारण प्रतिष्ठानको प्रसूति वार्डमा भर्ना भएका महिलाको समेत शल्यक्रिया रोकिएको छ ।
प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.गौरीशंकर साहले निःशुल्क गरिँदै आएको पीसीआर परीक्षण बन्द गरिएको बताउँदै अब २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर मात्र परीक्षण गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।प्रतिष्ठानले बुधवार सुचना नै जारी गरेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट रिएजेन्ट उपलब्ध नहुन्जेलसम्मलाई अब २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर मात्रै कोरोना परीक्षण गर्ने जनाएको छ ।
बीपीको मात्रै होइन प्रदेशका अरू ल्याबहरूमा पनि रिएजेन्ट सकिएको कारण कोरोना परीक्षणमा समस्या भएको छ । अहिले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मात्रै कोरोना परीक्षण भइरहेको प्रयोगशालाका निर्देशक जयन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । कोरोना परीक्षणका लागि रिएजेन्ट केमिकल उपलब्ध नहुँदा परीक्षण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
बिहिबार, ०८ असोज, २०७७, दिउँसोको ०२:५९ बजे